China Atody mpanamboatra atody atody | Min-Tai
a) Accumulator: Atody entina amin'ny latabatra mpanangona ny atody fehikibo afovoany, amin'ny fandaminana milamina ny atody iray manontolo, ny fizotran'ny atody tonga dia fehezin'ny sensor mba hisorohana ny fandoavana be loatra;
b) Fanitsiana atody: Ny masinina dia hitazona ny atody hitovy lalana, ny lafiny lehibe miakatra, izay afaka miantoka ny fihavanan'ny atody;
c) Fitaovana fanangonana atody: ny atody dia napetraka tsara sy malefaka ao anaty fitoeram-pandehanan'ny sensor misy atody, ampiharina amin'ny famaritana isan-karazany momba ny fitoeran-atody;
d) fanaterana lovia atody: Araka ny zava-misy marina, ny lovia atody dia azo zaraina ho karazany roa amin'ny lovia fandefasana mandeha ho azy na amin'ny tanana.
e) ny fanaterana ny vokatra vita: Rehefa avy nametraka atody dia nentin'ny conveyor, dia afaka manangona amin'ny alàlan'ny palletize manual na mandeha ho azy; (Raha mampiasa stacker tray, dia azo hamarinina amin'ny habetsaky ny trays, toy ny fametrahana 2/4 / 6.)
25000-30.000 atody / ora
Atody akoho vao na atody gana
Ny milina famonosana ny toeram-piompiana dia be mpampiasa amin'ny fambolena akoho (na gana) sy ny zavamaniry fanodinana atody. Ahenao ny vidin'ny asa, manatsara ny fahombiazan'ny asa.
Previous: Farmpacker atody
Masinina fonosana atody baoritra
Manadio atody sy milina fanangonana
Masinina fonosana atody elektrika
Masinina fonosana atody kely
Mpanamboatra masinina mamaky atody, Masinina manasokajy sy milina fanangonana, Masinina manendaka atody nandrahoina, Hatching atody Packer, Masinina fonosana atody, Masinina mamaky atody mandeha ho azy,